40 Maneho fanombohana vavaka amin'ny vavaka vaovao | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka 40 Maneho fiandohana vaovao ny vavaka
5 Izay mahavoky soa ny vavanao; ka dia havaozina tahaka ny an'ny voromahery ny fahatanoranao.
Manompo an'Andriamanitray izahay fiantombohana vaovao. Na inona na inona ratsy ratsy teo amin'ny fiainanao, Andriamanitra hanome anao fiandohana vaovao anio. Mbola afaka manomboka indray amin'ny fiainana ianao. Betsaka ny fahorian'ny marina, nefa hanafaka azy amin'izany rehetra izany Andriamanitra. Ity teboka 40 vavaka amin'ny fanombohana vaovao ity dia hitarika anao rehefa mivavaka amin'ny tenanao sy ny fivoarana ianao. Ireo teboka entin'ny vavaka dia hanome hery anao rehefa miady amin'ny ady ara-panahy amin'ny fanahin'ny tsy fahombiazana, ny tsy fetezana ary ny fahatafintohinana, rehefa mivavaka io fivavahan-doha io amin'ny finoana, hitako fa manome hery vaovao ny Tompo.
Fiandohana vaovao no fiandoham-baovao, omen'Andriamanitra fotoana fanararaotra faharoa ianao amin'ny fiainana. Fomba vaovao koa dia midika hoe famerenana indray, averin'Andriamanitra aminao izay rehetra nangalarin'ny devoly taminao. Ny fiandohana vaovao dia midika koa ny fanamarinan'Andriamanitra, Andriamanitra manamarina anao eo anoloan'ireo mpaneso anao ary mampiseho azy ireo fa tsy very maina ny fanompoana nataonao taminy. Ity valim-bavaka ity dia manondro fiandohana vaovao hametraka anao amin'ny làlan-java-baovao amin'ny fiainana, hahazo valiny avy hatrany ianao rehefa mivavaka aminao ireo fomba fivavaka amin'ny finoana anio ary toa an'i Gidra nanova ny fiainan'i Jabez, 1 Tantara 4: 9-10. Tsy maintsy miova ny tantaranao anio amin'ny anaran'i Jesosy.
1. Tompo ô, mamboly zavatra vaovao amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy
2. Ry Tompo, manongotra ny maizina amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy
3. Nofoanako ny fanahin'ny satana tsy mitongilana amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
4. Tompo ô, ataovy ahy ny anjaranao amin'ny anaran'i Jesosy.
5. Aoka ny fahalemena ara-panahy rehetra amin'ny fiainako hahazo ny fahatarana ankehitriny, amin'ny anaran'i Jesosy.
6. Aoka ny tsy fahombiazan'ny ara-bola rehetra amin'ny fiainako hahazo ajanina izao !!! Amin'ny anaran'i Jesosy
7. Aoka ny aretina rehetra amin'ny fiainako hahasitrana mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy.
8. Aoka ny fanahy rehetra ao amin'ny fahasosorana sy ny fahaketrahana rehetra hiala amin'ny fiainako ankehitriny, amin'ny anaran'i Jesosy.
9. Izaho dia mamoaka ireo demonia rehetra miasa amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
10. Avelao izay hampisaraka ahy amin'ny fahalehibiazana, hanomboka hiala ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy mahery.
11. Avelao hivoaka izay rehetra miafina ao amin'ny anaran'i Jesosy aho.
12. Mampifandray ny namako amin'ny namana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy aho
13. Avelao hofoanana ny hetsika demony rehetra ankehitriny, amin'ny anaran'i Jesosy.
14. Raiko, aparitaho ny drafitra ratsy rehetra nokendrena hiaina amin'ny fiainako sy ny hoaviko, amin'ny anaran'i Jesosy.
15. Nahafoy ny tenako tamin'ny fanahy ratsy aho, tamin'ny anaran'i Jesosy.
16. Tompo ô, raha tsy mandeha amin'ny làlako ny fiainako, ampio aho izao !!! Amin'ny anaran'i Jesosy
17. Aoka ny alitara rehetra manohitra ny fandrosoana hitranga amiko, ho fongotra amin'ny kotrokotr'Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy.
18. Mandidy ny anjarako aho hiova amin'ny tsara indrindra, amin'ny anaran'i Jesosy.
19. Aoka ny tanako ho tonga sabatry ny afo hamono hazo demonia, amin'ny anaran'i Jesosy.
20. Ireo hery mirehareha rehetra nomena ahy, hangina mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy.
21. Nesoriko ny tananako rehetra tamin'ny tanan'ny mpampahory ahy, amin'ny anaran'i Jesosy.
22. Avelao ho tapaka daholo ny devoly amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
23. Aoka ny lumpy rehetra handroaka ireo tsodranoko ho malemy, amin'ny anaran'i Jesoa.
24. Aoka ny zavatra tsara rehetra hohanin'ny fahavalo halefa ankehitriny, amin'ny anaran'i Jesosy.
25. Aoka ny hosotra ho an'ny fahatapahana ara-panahy hianjera amiko ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy
26. Tompo ô, ampianaro mpivavaka iray amin'ny anaran'i Jesosy aho
27. Tompo ô, arotsaho amin'ny afo ny aiko.
28. Ry Tompo, ampaherezo ny alitarako.
29. Izaho dia mandà ny fandotoana ara-panahy rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.
30. Tompo ô, omeo hery aho handresena ireo sakana rehetra tsy ho azon'ny fianjako amin'ny anaran'i Jesosy
31. Tompo ô, ampodio amin'ny anaran'i Jesosy ny taonako lany taminao
32. Ry Tompo, noho ny famindram-ponao, omeo vao manomboka vaovao amin'ny anaran'i Jesosy aho.
33. Hambarako fa ny zavatra maty rehetra amin'ny fiainako dia miverina amin'ny fiainana amin'ny anaran'i Jesosy
34 Ry Tompo ô, mitsangàna ary aparitaho ireo rehetra miady ny anjarako amin'ny anaran'i Jesosy
35 Ry Tompo, noho ny famindram-ponao, asio aho amin'izay rehetra ataoko amin'ny anaran'i Jesosy
36. Ny fahavalon'ny ankohonana rehetra miady ny aiko, dia haringana izao !!!, amin'ny anaran'i Jesosy.
37. Nambarako fa hihomehy ireo izay nihomehy tamiko tamin'ity taona ity tamin'ny anaran'i Jesosy aho.
38. Lazaiko fa rehefa mitsangana amin'ny tanana mahery avy amin'Andriamanitra aho, ny lehilahy sy ny vehivavy ratsy fanahy rehetra dia hianjera amin'ny anaran'i Jesosy.
39. tombo-kase ny fandreseko ny ran'i Jesosy.
40. Misaotra Anao Jesosy Tompo aho tamin'ny famaliana ny fivavahako.
Previous lahatsoratra30 Ny vavaka dia manondro fandresena ny fahavalonao
Next lahatsoratra20 mivavaka momba ny fitarihana sy paikadin'Andriamanitra
20 Ireo teboka vavaka hanoherana ny fanafihana ara-panahy
21 Andro Ny vavaka sy ny vavaka fifadian-kanina ho an'ny Fiangonana 2020